“မြမြ”ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက် (သို့ ) အဖြေမရှိသေးတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်
အဆုတ် ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဂျင်းနဲ့ ဘယ်လို ဖယ်ရှားမလဲ…?
အဆုတ် ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဂျင်းနဲ့ ဘယ်လို ဖယ်ရှားမလဲ Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာ အဆုတ် လည်း ပါဝင်နေပါတယ် …. ။ ဒါ့ကြောင့် အဆုတ် ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးပြီး အဆုတ် ကို သန့်စင်အောင် […]
အဆုတ်​ထဲ​ရေ၀င်​ပြီးအ​မော​ဖောက်​​​ဝေဒနာ​ခံစား​နေရ​တဲ့ ကစ်​ကစ်​ကိုသွားလှူခဲ့တဲ့ ပိုပို အဆုတ်​ထဲ​ရေ၀င်​ပြီးအ​မော​ဖောက်​​​ဝေဒနာ​ခံစား​နေရ​တဲ့ ဟာသ သရုပ်​​ဆောင်​ ကစ်​ကစ်​ကို အဆို​တော်​ပိုပိုနဲ့ သူရဲ့မိတ်​​ဆွေများကအလှူ​ငွေ လှူဒါန်းခဲ့သလို ကုတင်​ငါးရာ​​ဆေးရုံမှ ​ဝေဒနာရှင်​တချို့ကိုလည်း အလှူ​ငွေများထပ်​မံလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်​။ CRD-8 day Unicode အဆုတျထဲရဝေငျပွီးအမောဖောကျဝဒေနာခံစားနရေတဲ့ ကဈကဈကိုသှားလှူခဲ့တဲ့ ပိုပို အဆုတျထဲရဝေငျပွီးအမောဖောကျဝဒေနာခံစားနရေတဲ့ ဟာသ သရုပျဆောငျ ကဈကဈကို အဆိုတျောပိုပိုနဲ့ သူရဲ့မိတျဆှမြေားကအလှူငှေ […]
အားအလွန်ပြင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဦးတည်လာနေတာကြောင့် အိန္ဒိယမှာ လူ ရှစ်သိန်းလောက်ကို ဘေးလွတ်ရာ ရွှေ့ပြောင်း…
“ရန်ကုန်တွင် ကျူး​ကျော်​​တွေ အတွက် မြေနေရာအခမဲ့ပေးမည်”
ကျူး​ကျော်​​တွေအတွက်​ မြေနေရာအခမဲ့ပေးရန် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ စတင်​ဆောင်​ရွက် ရန်ကုန်၊ မေ ၂ ကျူး​ကျော်​​တွေအတွက်​ မြေနေရာအခမဲ့ပေးရန် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက စတင်​ဆောင်​ရွက်​​နေပြီဖြစ်​တယ်​လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံဖြိုးရေးဦးစီးဌာနက​ သိရပါတယ်​။ အဆိုပါအစီအစဉ်​ကို လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာ စတင် အကောင်အထည် ဖော်မှာဖြစ်​ပြီး၊ အဲဒီ စီမံကိန်းကို ၆ လအတွင်း အပြီးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကာ […]
“မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား ၁ ဂရန်ကို ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန်တဲ့ ဗန်ဒါရွက်ရဲ့ သဘာဝကပေးတဲ့ ဆေး..”
မသိသူ​​ကျော်​သွား သိသူ​ဖော်​စား ဆိုတဲ့ စကားဟာ စကားပုံမဟုတ်​ပါဘူး​ ဒီ​နေ့မိသားစုတို့ကို ​ပြောပြချင်​တဲ့​ဆေးနည်းက ဗန်​ဒါရွက်​ အစွမ်းထက်​ပုံအ​ကြောင်းပါ ဗန်​ဒါ(ဗာဒံ)ရွက်​ ဗာဒံသီး ဟာ ​မြေပြန့်​​ဒေသ ပူအိုက်​တဲ့ရာသီဥတုအတွက်​​တော့ မြန်မြန်နဲ့ လွယ်လွ​​ယ်​​အရိပ်​ရလို့ တချိူ့ ကမိမိအိမ်​ခြံဝင်းမှာ အရိပ်​ရ​အောင်​ စိုက်​ကြတယ်​ ​နေရာတိုင်းမှာလည်း အ​လေ့ကျ ​​​​ပေါက်​ပါတယ်​ သို့​သော်​ ဗန်​ဒါပင်​ရဲ့အစွမ်းကို​တော့ […]
“ကိုယ့်လက္ခဏာမှာ ဂမ္ဘီရကြက်ခြေ၊ စေတီ၊ တြိဂံ စတဲ့ ပုံစံတွေ ပါလာခဲ့ရင်…”
အိန္ဒိယသားတွေရဲ့ ရှေးဟောင်း လက္ခဏာကျမ်းတွေမှာ လက်ဖဝါးပြင်ပေါ်က သင်္ကေတွေကို ဘယ်လို နိမိတ် ကောက်ယူ ဖတ်ကြားတယ် ဆိုတာ ပြသခဲ့သလိုပဲ နောက်ပိုင်းခေတ်မှာ နာမည်ကျော် လက္ခဏာဆရာကြီး ကိုင်ရိုကလည်း စာအုပ်တွေ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ဖဝါးပြင်ကို သေချာ ကြည့်ပြီး ဒီသင်္ကေတွေ ပါနေသလား ဆိုတာ တိုက်ဆိုင် […]
လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ပြီးနောက် သန်းထီပေါက်ခဲ့တဲ့ ကံထူးရှင် အိန္ဒိယအမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ ကံဇာတာ ဆက်တိုက်ကောင်းခဲ့ပုံက အံ့သြဖွယ်ရာ ဆန်းကြယ်လှပါတယ်။ မိုဟာမက် ဘက်ရှီယာ အဗ္ဗဒူလ်ခါဒါ အမည်ရှိတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှအမျိုးသားက အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ဒူဘိုင်းမြို့မှာ အလုပ်လုပ်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ခါဒါက ဒူဘိုင်းကနေ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း ကာရာလာပြည်နယ်ရှိ Thiruvananthapuram မြို့ကို မိသားစုနဲ့အတူ […]
ရှေးပညာရှိများရဲ့ အလွန်အဖိုးတန်သော အဆိုအမိန့်များ (မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်)
ရှေးပညာရှိများရဲ့ အလွန်အဖိုးတန်သော အဆိုအမိန့်များ (မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်) (၁) မဟောင်တတ်သော ခွေးသည် ကိုက်တတ်၏။ စကားမပြောဘဲ ဆိတ်ဆိတ်နေသူသည် မိုက်တတ်၏။ (၂) အကောင်းပြောလျင် ချက်ချင်း ၀မ်းမသာပါနှင့်၊ မကောင်းပြောလျင်လည်း ချက်ချင်း ၀မ်းမနည်းပါနှင့်။ (၃) ကန်ဖူးသော မြင်းသည် ကန်ချက်ကို မမေ့။ လူသည်လည်း အကျင့်ပျက်ကို […]
သင်္ဃန်းကျွန်း(စံပြ)ဆေးရုံ၌ မီးဖွားပြီးစ အမျိုးသမီးသုံးလွှာပေါ်မှ ခုန်ချသေဆုံး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သင်္ဃန်းကျွန်း(စံပြ)ဆေးရုံတွင် မီးဖွားပြီးခါစ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သုံးလွှာပေါ်မှ ခုန်ချသေဆုံးခဲ့မှု မေ ၁ ရက် နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် သင်္ဃန်းကျွန်း(စံပြ)ဆေးရုံ ၆ လွှာဆေးကုသဆောင်၏ အထပ် ၃လွှာမြောက်မှ ခုန်ချသေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ […]